High blood pressure – Healthy Life Journal
အပူအအေး ရုတ်တရက် အပြောင်းအလဲကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်း
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့ နေရာကနေ အေးတဲ့နေရာကို ဝင်လိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြော ပြတ်တာက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အဓိကအားဖြင့်တော့ သွေးတိုးအခံရှိတဲ့သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပူတဲ့နေရာကနေ...
အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် သွေးတိုးနေရင် . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကျွန်တော့်အသက် ၂၆ နှစ်ပါ။ သွေးတိုးနေလို့ပါ။ ဒီအရွယ်နဲ့ သွေးတိုးတာက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ။ ဘယ်လိုဆင်ခြင် နေထိုင်သင့်ပါသလဲ။ ကိုလင်း၊ တာမွေ။ A. အသက် ၄၀...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သွေးတိုးတာကို ကုသမှုမခံယူဘဲနေရင် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ လူအများစုက သွေးတိုးတာကို ပုံမှန်အဆင့်အထိ လျှော့ချနိုင်ဖို့ ဆေးဝါးတွေကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးဝါးတွေမှီဝဲတဲ့အခါ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီ မှီဝဲသင့်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့...
၁၀ မိနစ်အတွင်း သွေးတိုးကျစေမည့် သဘာဝနည်း ၈ သွယ်
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အလွန်အမင်း ခေါင်းကိုက်တာ၊ နုံးချည့်တာ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်တာနဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်တာတွေ ခံစားရရင် သွေးတိုးတာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေက စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ အ၀လွန်တာ ဒါမှမဟုတ် အခြေခံရောဂါဝေဒနာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့လူတွေက ဒီလိုဝေဒနာတွေကို...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. သွေးတိုးရင် စိုးရိမ်ရပါသလား ဆရာ။ A. သွေးတိုးတိုင်း စိုးရိမ်ရလားဆိုတာမျိုး လူနာတွေက မကြာခဏ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ သွေးတိုးတာနဲ့အတူ အသက်ရှူမ၀တာ၊ မောတာ၊ နှလုံးထိခိုက်တာ၊ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊ သတိလစ်တာ၊ တက်တာ၊...